Sida loo Copy Music ka Lugood in Flash Drive
> Resource > Lugood > Easy Siyaabaha Copy Music ka Lugood in Flash Drive
"My Lugood aad u ballaaran oo aan qorshaynayaa in aan nuqul music ka Lugood in flash drive. Suroobi karaa waddo in aniga iima ogola in aad nuqulka music Lugood in flash drive gabayo. Waxa aan akhriyo internet ka waxaa lagu taageero oo keliya ilaa Lugood file Library :.. Lugood Library.itl in flash drive Tani waa waxa aan aan u baahnayn Si loo hubiyo ammaanka music oo dhan, Waayo, labada Lugood iibsaday iyo dooxay ka CD-yada, kuwaasna waa inaan nuqul ka Lugood in flash drive fikrad kasta ".?
Ok, waa run in marka aad ka raadin "gurmad Lugood Library in flash drive", aad ku socoto si aad u hesho wax badan oo ku saabsan threads taageerto ilaa file Lugood Library.itl. Iyo tan sameeyaan, marnaba ma aad heeso ka Lugood in flash heli doonaa. In this article, 2 siyaabo waxaa lagu soo bandhigay in ka Lugood wareejiyo music in flash drive.
Xalka 1: music Nuqul ka folder Lugood Media u iftiimiyo drive adag
Solution 2; nuqul music Lugood in flash drive ka iPod / iPad / iPhone ah
Xalka 1. Copy music ka folder Lugood Media u iftiimiyo drive adag
Youcre Haddii yaqaanaan Lugood ama ma, waa inaad marka hore ka heli rabtid Advanced u Lugood Library. Burcad Lugood iyo guji Edit> Xulasho. Riix tab Advanced. Laga soo bilaabo sanduuqa, waxaad ka arki kartaa laba doorasho: Ka dhig folder Lugood Media abaabulan iyo files Copy in Lugood Media folder markii isagoo intaa ku daray in maktabadda. Fadlan fiiri.
Riix File> Library> Abaabulaan Library. In la abaabulo sanduuqa wadahadal Library, hubi "raaciyo files".
By samaynayaan wixii ku xusan 2 tallaabooyinka la yidhaahdo, oo dhan files warbaahinta in Lugood Library yihiin mooyee folder Lugood Media. Ka dibna waxaad u tagi kartaa folder Media si ay nuqul music oo dhan u iftiimiyo drive adag. Computer Open, guji Music dhanka bidix iyo furi folder Lugood dhanka midig. Laga soo bilaabo halkan, waxaad ka arki kartaa gal ah sida "Lugood Media" magacaabay. Waxaa fur oo aad ka arki kartaa folder Music ah. Dhammaan songs Lugood aad halkan ku badbaadiyey. Hadda waxaad si toos ah nuqul karaa folder Music ah in flash ah.
Cillado: Tani waxay u baahan xal waaweyn drive free adag tahay in la badbaadiyo files warbaahinta dheeraad ah. Haddii boos lacag la'aan ah aad computer ma aha weyn ku filan, waa in aad codsato xal 2 Oo sidan sameeyaan files nuqul.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa TunesGo in aad nuqulka music ka Lugood in flash drive, waa ku dhawaad ​​tallaabo la mid ah oo la "beddelashada Music ka PC / Mac si casriga ah" sida hoos video:
Xalka 2; nuqul music Lugood in flash drive ka iPod / iPad / iPhone ah
Hab sahlan oo nuqul ka music Lugood in flash drive gabayadii waa in la isticmaalo Wondershare TunesGo iyo mid ka mid ah iPod, iPhone, iPad ama xataa inay hoos u hesho in ay hawsha.
Tallaabada 1. nidaameed Lugood music in iPod, iPhone ama iPad
Connect aad iPod, iPhone, iPad ama la Lugood computer iyo bandhigista. Guji View> Show galeeysid. Riix qalab aad iyo guji Music tab si hagaagsan heesaha oo dhan ka Lugood in qalab aad. Oo diido qalab aad.
Download TunesGo oo ku xidh on your computer. Hadda labada versions taageeraan iPhone, iPod, iyo iPads. Si aad u hesho macluumaad badan, guji halkan . TunesGo (Mac) ma si sax ah ula xiriiri iPod 3. shaqeeyaan Kadib markii ay TunesGo, qalab aad la ogaan doonaa.
Tallaabada 3. Transfer Lugood music in flash drive
Riix Media on furmo suuqa weyn ee TunesGo u muujiyo Music tab. Dhammaan music Lugood aad synced qalabka aad baa laga arki karaa. Dooro kuwa doonayay oo guji "Dhoofinta in My Computer" ka "Dhoofinta" liiska hoos-hoos. In cusub uu furmo suuqa, aad u ogaato flash drive iyo badbaadin, kuwaas oo heeso Lugood.
Marka aan sidaa yeelno, nuqul ma la samayn doonaa. Oo dadkii oo dhammu songs waa amarka si sax ah oo ku saabsan mid ka mid folder aad flash drive.